စတော်ဘယ်ရီ Buttercream နှင့်အတူလတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့် - ကိတ်မုန့်
လတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်နှင့်စတော်ဘယ်ရီ Buttercream စာရွက်
လတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီကနေလုပ်တဲ့စတော်ဘယ်ရီ buttercream နှင့်အတူစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်!
လတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီနှင့် Jell-O နှင့်လုပ်သောစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်? ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ လျှို့ဝှက်ချက်ကလတ်ဆတ်နေသည် စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချရေး သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့် Battery ကိုရန်နှင့်ကျန်ထဲသို့ကြွင်းသောအရာ buttercream နှင်းခဲ အစစ်အမှန်စတော်ဘယ်ရီကဲ့သို့အရသာရှိတဲ့လတ်ဆတ်တဲ့စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်စာရွက်အတွက်!
သငျသညျနောက်ကျ Pinterest မှရောက်ခဲ့လျှင်, သင်စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထရီလီယံချက်ပြုတ်နည်းများရပါလိမ့်မယ်။ ငါသေချာပေါက်ဖြန့်ဝေဘို့အလိုနှင့်ငါစိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်ထင်တဲ့နာမည်ကြီးဘလော့ဂ်များအချို့မှကြိုးစားခဲ့သည်။ ချက်ပြုတ်နည်းအများစုသည်စတော်ဘယ်ရီအရသာအတွက် Jell-O သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သည့်ဘောဇဉ်ရောစပ်ခြင်းများပါ ၀ င်သည်။
အခုတော့ငါဟာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးမုန့်ဖိုမဟုတ်တော့ပေမယ့်စိန်ခေါ်မှုကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒါကြောင့်စတော်ဘယ်ရီမုန့်ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တယ်။ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်ခုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပေး၏။ ငါအစစ်အမှန်စတော်ဘယ်ရီကိုသုံးခဲ့ရတယ်နှင့်အရသာကိတ်မုန့်၌တစ် ဦး တည်းစစ်မှန်သောစတော်ဘယ်ရီကဲ့သို့အရသာခဲ့ရသည်။
ယခုငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး။ ငါက Jell-O တချို့ကိုချစ်ပေမယ့်ကိတ်မုန့်တွေမှာမဟုတ်ဘူး။ Gelatin သည် Gummy နှင့်သိပ်သည်းမှုကဲ့သို့ texture ကို fluffy ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ကိတ်မုန့်ထဲသို့ထည့်ရန်စဉ်းစားမည့်အရာမဟုတ်ပါ။ Jell-O နှင့်ပြုလုပ်ထားသောစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးဆုံးမှာစတော်ဘယ်ရီအတုကဲ့သို့အရသာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Jolly Ranchers မှာတော်တော်အရသာရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိတ်ကသိပ်မများဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ gelatin မပါဘဲစတော်ဘယ်ရီမုန့်လုပ်ဖို့ပဲ။
ဒါနဲ့စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်နည်းတွေကိုစတင်စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ ငါစာရွက်ပေါ်တွင်ဤမျှကာလပတ်လုံးခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ မအောင်မြင်သောကြိုးစားမှုများစွာနှင့်ငါအရှုံးပေးလုနီးပါး။ ဤအချက်သည်သင်စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်အကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည်ထက်သင်ပိုမိုသိရှိလိုသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်လုပ် vanilla ကိတ်မုန့်ထဲသို့စတော်ဘယ်ရီလတ်ဆတ်ထည့်နိုင်သလား?
သူတို့ကလတ်ဆတ်တဲ့စတော်ဘယ်ရီကိုခုတ်ထွင်ပြီးကိတ်မုန့်ထဲထည့်ပြီးအံ့သြဖွယ်အရသာရှိသည့်မုန့်ဖုတ်ဖို့ဗီဒီယိုကိုသင်မြင်ဖူးပါသလား။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီဟာကြီးလေးတဲ့မုသားပဲ။
စတော်ဘယ်ရီမုန့်ဖုတ်သောအခါသူတို့သည်သူတို့၏စတော်ဘယ်ရီအရသာကိုဆုံးရှုံးရုံသာမကအမှန်တကယ်ပင်ထူးဆန်း။ ဝမ်းနည်းဖွယ်မီးခိုးရောင်အရောင်များကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဒါဟာကိတ်မုန့်ထုပ်ထဲမှာပုပ်နေတဲ့အသီးအိတ်ကပ်ပုံနဲ့တူတယ်။ လုံးဝ appetizing မဟုတ်!
ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုမှာစတော်ဘယ်ရီသစ်ကိုခုတ်ပြီးအရည်ဖျော်လိုက်တယ်။ ငါကုန်တယ်စတော်ဘယ်ရီ Battery ကိုနှင့်အသီးဖျော်ရည်နို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ငါထည့်ထားတဲ့ဖျော်ရည်နဲ့နို့ပမာဏအတူတူနုတ်လိုက်တယ်၊ ဒါနဲ့ငါ့ဘက်ထရီကိုအရည်များများမထည့်ဘူး။ ငါစတော်ဘယ်ရီအတွက်သကြားဓာတ်အကောင့်မှ 1 အောင်စလျှော့ချ။ ငါဒီအလုပ်မလုပ်မယ်လို့တော်တော်သေချာပေမယ့်ငါသေချာအောင်ချင်တယ်။ ငါကြောက်ရွံ့သလိုပဲ၊ ဒီကိတ်မုန့်ကအရမ်းစို၊ ငါစိတ်ကူးထားတဲ့စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်မဟုတ်ဘူး။
ဒီစမ်းသပ်မှုမှာငါအေးခဲခြောက်ခြောက်သောစတော်ဘယ်ရီသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျိန်းသေလတ်ဆတ်သောအဖြစ်ရှာရန်အဖြစ်မလွယ်ကူပေမယ့်နေရာများအများစုသူတို့ကိုသယ်ဆောင်။ သူတို့ကစျေးပေါတယ်။ 1.7oz အိတ်ငါ့ကိုဒေါ်လာ ၄ ကုန်ကျတယ်။ ငါအိတ်တစ်ခုလုံးသုံးတယ်
မိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) တွင်ချောကလက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမည်သို့တည်မြဲမည်နည်း
ငါစတော်ဘယ်ရီကိုနံ့သာမျိုးတွင်ကြိတ်လိုက်ပြီးအပိုင်းအစကြီးများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးခြောက်သွေ့သောအရာများထဲသို့ထည့်လိုက်သည်။ ငါကဒီကိတ်မုန့်အပိုဆောင်းအစိုဓာတ်လိုအပ်လိမ့်မယ်ခံစားခဲ့ရဒါကြောင့်ငါအရည်တက်နှင့်ဟင်းရွက်ဆီအနည်းငယ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အညိုရောင်ကိုတန်ပြန်ရန်ပန်းရောင်နှင့်အနီရောင်အစားအစာအရောင်များကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
ဒီကိတ်မုန့်ကယ့်ကိုကောင်းပါတယ်! ပေါင်မုန့်သည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အရသာသည်အလွန်တောက်ပ။ စတော်ဘယ်ရီရနံ့နှင့်ကျွန်ုပ်စာအုပ်တွင်အနိုင်ရသည်။ ဒါပေမဲ့ဒီစာရွက်ကို REAL စတော်ဘယ်ရီနဲ့ရှာနေတုန်းပဲ။
ငါအရင်စမ်းသပ်မှုများတွင်စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချရေးကိုအသုံးပြု။ ကြိုးစားခဲ့ဖူးပေမယ့် texture ကယ့်ကို gummy နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါတကယ်ထူထဲတဲ့လျှော့ချရေးစေရန်နောက်ထပ်အရည်လျှော့ချဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါသည်လည်းစတော်ဘယ်ရီအရသာ၏ tartness ပိုမိုပြင်းထန်လာဖို့သံပုရာ zest အတွက်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
စတော်ဘယ်ရီထုတ်ယူမှုအစားစတော်ဘယ်ရီဆေးကြောခြင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (မလိုအပ်သော်လည်းအရောင်နှင့်အရသာအတွက်အထောက်အကူပြုသည်) ။ ငါရှာနေတဲ့ပန်းရောင်အရောင်ရဖို့လျှပ်စစ်ပန်းရောင်အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းတစ်ချို့ထည့်လိုက်တယ်။
ရလဒ်? စတော်ဘယ်ရီနှင့်အတိအကျအရသာရှိသောမယုံနိုင်လောက်အောင်စိုစွတ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစတော်ဘယ်ရီမုန့်။
ငါမစားဘူး၊ ငါကိတ်မုန့်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါငါရွှင်လန်းစွာအော်ဟစ်လိုက်သည်။ အဆိုပါအစအနစုံလင်သောပဲ! အဆိုပါအရသာအံ့သြဖွယ်ပါ! ငါကအိမ်မှာရှိတဲ့အခန်းအားလုံးဆီပြေးသွားပြီးသမီး၊ ခင်ပွန်းနဲ့လက်ထောက်အားလုံးကိုကိတ်မုန့်ချက်ပြုတ်ခိုင်းတယ်။ ငါရုံအရူးသွားမခံခဲ့ရသေချာစေချင်တယ်။ ဒါကတကယ့်သဘောတူညီချက်ပဲ!
ပတ်ပတ်လည် Rave ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း! ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင့်ဆုံးငါး *
သင့်ရဲ့စတော်ဘယ်ရီနှင့်သကြားကိုအလယ်အလတ်အချဉ်ရည်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အေးခဲလျှင်ပထမဆုံးရေခဲဖျက်ပါ။ သူတို့ကလတ်ဆတ်တဲ့ဖြစ်လျှင်ထိပ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တုံးသို့ခုတ်။ သငျသညျချောမွေ့လျှော့ချရေးပိုနှစ်သက်လျှင်နှစ်မြှုပ်ခြင်း Blender နှင့်အတူရောနှောနေခြင်း။
သံပုရာ zest, ဖျော်ရည်နှင့်ဆားရောမွှေပါ။
သင်၏ကိတ်မုန့်ဖုတ်ထဲတွင်မသုံးမီစတော်ဘယ်ရီလျှော့ချမှုကိုအေးမြစေပါ။ ငါ Battery ကိုတစ်ဝက်နှင်းခဲထဲမှာတစ်ဝက်ကိုသုံးပါ!
ထုပ်ပိုးနေစဉ်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအေးခဲအောင် (သို့) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေးခဲအောင်လုပ်ပါ။ ဆန္ဒရှိလျှင်အညိုရောင်အနားနှင့်ထိပ်ချွတ်ချုံ့။
လတ်ဆတ်တဲ့အရသာရှိတဲ့စတော်ဘယ်ရီသီးနှင်းခဲတွေအတွက်စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချမှုကိုမင်းရဲ့ buttercream လုပ်ပြီးခေါက်ထားပါ။
သင်၏နောက်ထပ်ကိတ်မုန့်ကိုအပေါ်တွင် ထား၍ ကျန်အလွှာများနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
ကိတ်မုန့်တစ်လုံးလုံးကိုစတော်ဘယ်ရီထောပတ်မုန့်ပါးလွှာဖြင့်ဖုံးပြီး buttercream ခိုင်မာသည်အထိမိနစ် ၂၀ ခန့်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်အေးပါ။ ဒါကိုအစအနကုတ်အင်္ကျီလို့ခေါ်တယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်အလွှာဖြင့်မုန့်ကိုအေးခဲပြီးအလိုအလျောက်အလှဆင်ပါ။ ဒီကိတ်မုန့်ကိုထမ်းဆောင်သည်အထိရေခဲသေတ္တာရပါမည်။ ကိတ်မုန့်ကိုအမှုမဆောင်မီ ၂ နာရီအခန်းအပူချိန်တွင်ထိုင်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ အအေးကိတ်ကအရမ်းမမြည်းဘူး။
ဤလတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီမုန့်ကို FRESH စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အဆိုပါကိတ်မုန့်လှပပန်းရောင်အရောင်နှင့်အတူနူးညံ့သည်။ နွေရာသီအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကိတ်မုန့်! ဤစာရွက်သည်စတော်ဘယ်ရီ buttercream နှင့်စတော်ဘယ်ရီသီးတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော 8'x2 'ကိတ်မုန့်သုံးလုံးကိုပြုလုပ်သည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -နှစ်ဆယ် မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -ငါးဆယ် မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၁ နာရီ ၁၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ603kcal
▢၁၄ အောင်စ (397 ဆ) အားလုံးရည်ရွယ်ချက်မုန့်ညက်
▢1 1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါ
▢၈ အောင်စ (၂၂၆ ဆ) unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်
▢၁၀ အောင်စ (၂၈၄ ဆ) သကြားဓာတ်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း vanilla ထုတ်ယူ
▢1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သံပုရာထုတ်ယူ
▢1 1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း စတော်ဘယ်ရီ emulsion သို့မဟုတ်ထုတ်ယူ, ငါ LorAnn အဆီများကိတ်မုန့် emulsion ကိုအသုံးပြုပါ
▢zest တစ်ခု သံပယိုသီး
▢၁ ဇွန်း သံပုရာဖျော်ရည် လတ်ဆတ်သော
▢၆ အောင်စ (၁၇၀ ဆ) ဥအဖြူ အခန်းအပူချိန်
▢၄ အောင်စ (၁၁၃ ဆ) စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချရေး အခန်းအပူချိန်
▢၆ အောင်စ (၁၇၀ ဆ) နို့ အခန်းအပူချိန်၊ နို့လုံးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
▢1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ပန်းရောင်အစားအစာအရောင် ငါ Americolor လျှပ်စစ်ပန်းရောင်ဂျယ်လ်ကိုသုံးသည်
▢၃၂ အောင်စ (907 ဆ) လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်အေးစက်နေတဲ့စတော်ဘယ်ရီ အရည်ပျော်ခဲ့သည်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သံပုရာ zest
▢၁ ဇွန်း သံပုရာဖျော်ရည်
▢၁ ဆိတ် ဆားငန်
▢၄ အောင်စ (၁၁၃ ဆ) သကြား မလုပ်မနေရ
လွယ်ကူသောစတော်ဘယ်ရီ Buttercream Frosting
▢၄ အောင်စ (၁၁၃ ဆ) Pasteurized ကြက်ဥလူဖြူ
▢၁၆ အောင်စ (454 ဆ) unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်
▢၁၆ အောင်စ (454 ဆ) သကြားမှုန့်
▢whisk နှင့်လှော်ပူးတွဲပါသည့် (သို့မဟုတ်လက်ရောနှောခြင်း) ဖြင့်ရောနှောရပ်ပါ။
လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်အရည်ပျော်နေသောအေးခဲနေသောစတော်ဘယ်ရီကိုအလယ်အလတ်ဇွန်းတစ်ဇွန်းထဲသို့ထည့်ပါ။ ရွေးချယ်စရာ - သင်စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချရေးချောမွေ့သော texture ကိုနှစ်သက်ပါကစတော်ဘယ်ရီကို emersion blender တစ်ခုနှင့်ရောစပ်ပါ။
အလယ်အလတ်အဆင့်မြင့်အပူနှင့်သကြား (ဆန္ဒရှိလျှင်), သံပုရာ zest, သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်ဆားထည့်ပါ။ မီးလောင်ရာကိုကာကွယ်ရန်ရံဖန်ရံခါနှိုးပါ။
ပူဖောင်းပြီးတာနဲ့အပူကိုအလတ်စား - အနိမ့်သို့လျှော့ချပြီးဘယ်ရီသီးတွေစတင်ကွဲထွက်သွားပြီးအရောအနှောတစ်ဝက်ခန့်လျော့ကျသွားတဲ့အထိဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချပါ။ ဒီဟာကမိနစ် ၂၀ လောက်ကြာလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်၏အရောအနှောသည်တစ်ဝက်ခန့်လျော့နည်းသွားပြီးရေစိုနေပါကအရည်အားလုံးမထွက်မချင်းချက်ပြုတ်ပါ။
မီးလောင်ရာကိုကာကွယ်ရန်အရောအနှောများကိုရံဖန်ရံခါနှိုးဆော်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်နဲ့တူတဲ့စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချရေးခွက် ၂ ခွက်လောက်သင့်ကိုအဆုံးသတ်သင့်တယ်။ အခြားကွန်တိန်နာတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်း။ အသုံးပြုခြင်းမပြုမီအအေးခံပါ။
သင်ကိတ်မုန့်ပြားအတွက်လျှော့ချမှုအချို့ကိုအသုံးပြုပြီးအချို့ကိုနှင်းခဲများနှင့်ကျန်အရာများမှာအစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းရန်အတွက်ကိတ်မုန့်အလွှာများအကြားဖြည့်ရန်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကျန်ရှိသောလျှော့ချရေးကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်တစ်ပတ်အထိသိုလှောင်နိုင်သည်သို့မဟုတ် ၆ လကြာအေးခဲနိုင်သည်။
သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအခန်းအပူချိန်သို့မရောက်မှီ ၁ နာရီအကြာတွင်သင်၏စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချမှုကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှထုတ်ယူပါ။
မီးဖိုမှထိန်သိမ်းသည့်နေရာကိုအလယ်အနေအထားသို့ချိန်ညှိပြီး350ºF / 176ºCသို့အပူပေးပါ။
8 '' ကိတ်မုန့်သုံးလုံးကိုကိတ်မုန့်သုံးလုံး (သို့) ပိုမိုနှစ်သက်သောဒယ်အိုးဖြူနှင့်အတူအမဲပေးပါ
သီးခြားအလယ်အလတ်ပန်းကန်လုံးထဲတွင်နို့၊ စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချခြင်း၊ စတော်ဘယ်ရီ emulsion၊ vanilla ထုတ်ယူမှု၊ သံပုရာထုတ်ယူမှု၊
အခန်းအပူချိန်ထောပတ်ကိုသင့်မတ်တပ်ရပ်သည့်နေရာတွင်လှော်ခတ်ထားခြင်းဖြင့်ပေါင်းထည့်ပြီးစက္ကန့် ၃၀ ခန့်ချောမွေ့။ တောက်ပသည်အထိအလတ်စားမြန်နှုန်းဖြင့်ရိုက်သည်။
တဖြည်းဖြည်းသကြား၌ဖြန်း, အရောအနှောခန့် 3-5 မိနစ်ခန့် fluffy နီးပါးဖြူသည်အထိရိုက်တယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်ကြက်ဥလူဖြူများကိုတစ်လုံးထဲထည့်ပါ၊ သင်၏အရောအနှောဤအချက်မှာစည်းလုံးကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အခွံခွာပြီးကျိုးပဲ့သွားလျှင်သင်၏ထောပတ်သို့မဟုတ်ကြက်ဥအဖြူများသည်အလွန်အေးလွန်းသည်။
မြန်နှုန်းနည်းသောအရောအနှောနှင့်ရောခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဘက်ထရီထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက်နို့အရောအနှော၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကိုချက်ချင်းလိုက်လံထည့်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂ ကြိမ်ထပ်လုပ်ပါ။ Battery ရောနှောနေသည့်အချိန်တွင်ရောနှောခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးပန်းကန်လုံး၏ဘေးပတ်လည်ကိုရော်ဘာ spatula ဖြင့်ခြစ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ရေခဲမုန့်နှင့်တူပါကသင်မှန်ပါသည်။
Battery ကိုပြင်ဆင်ထားသောအိုးများအကြားညီမျှစွာခွဲပါ။ ထိပ်ရော်ဘာ spatula နှင့်အတူချောမွေ့စေ။
၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နှင့် ၁၇၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ကိတ်မုန့်များကိုသူတို့အလယ်တွင်မြဲမြံစွာခံစားရသည်အထိသွားနှင့်သွားသွားသည်သန့်ရှင်းလာသည်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှသောအခွံများဖြင့်မိနစ် ၃၀ မှ ၃၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။
အိုးတလုံးကိုဝါယာကြိုးထုပ်တစ်ခုပေါ်တင်ပြီး ၁၀ မိနစ်အေးအောင်ထားပါ။ ထို့နောက်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုထိန်သိမ်း။ လှန်ပြီးအအေးခံပါ။
ကြက်ဥအဖြူနှင့်သကြားမှုန့်များကိုမတ်တပ်ရပ်သည့်ပန်းကန်လုံးတွင်ထည့်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအနိမ့်အမြင့်တွင်ပေါင်းထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်စွာရိုက်ပါ
သင်၏အရောအနှောရောနှောထားသောအိုး၌ Pasteurized ကြက်ဥအဖြူနှင့်အမှုန့်သကြားတို့ကိုထည့်ပါ။ ပစ္စည်းများကိုပေါင်းထည့်ပြီးအနိမ့်အမြင့်များကို ပေါင်း၍ ၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ရိုက်ပါ။
သင်၏နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်ထဲသို့အဖြူရောင်၊ အလင်းရောင်နှင့်တောက်ပသည်အထိ ၈-၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်စွာရိုက်သည်။ အစပိုင်းမှာတော့အခွံမာပြီးအဝါရောင်ရှိကောင်းရှိမယ်။ ကြာပွတ်ကိုဆက်လုပ်ပါ
စတော်ဘယ်ရီလျှော့ချရေး, vanilla ထုတ်ယူနှင့်ဆားထည့်ပါနှင့်ထည့်သွင်းသည်အထိကြာပွတ်ဆက်လက်။
ရွေးချယ်နိုင်သည့်အရာ - လှိမ့်တွယ်ကပ်တွယ်မှုသို့ပြောင်းပြီး buttercream ကိုအလွန်ချောမွေ့စေရန်နှင့်လေပူဖောင်းများကိုဖယ်ရှားရန် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိရောစပ်ပါ။
သင်၏ပထမဆုံးစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်ကိုကိတ်မုန့် (သို့) ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်တင်ပါ။ လိုအပ်လျှင်ချွန်ထက်သောဓားဖြင့်အမိုးခုံးကိုချုံ့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကိတ်မုန့်ထိပ်သည်ပြားနေသည်။
အလွန်ပါးလွှာသောအလွှာတစ်ခု (သို့) သင်၏အအေးခံခြင်းကိုလျှော့ချထားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထည့်ပါ။ ဤသည်ကိတ်မုန့်ထဲသို့စိမ်ကူညီပေးသည်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုနှင့်စတော်ဘယ်ရီအရသာထပ်ပြောသည်။
စတော်ဘယ်ရီ buttercream ၏အလွှာထည့်ပါ, ငါ 1/4 '' အဘို့အရိုက်ကူး။ ၎င်းကိုသင်၏ offset spatula ဖြင့်ချောမွေ့သည်အထိချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ကျန်ရှိသော buttercream ဖြင့်သင်၏ကိတ်မုန့်၏အပြင်ဘက်ကိုအေးခဲစေပြီးလတ်ဆတ်သောအချိုများဖြင့်အလှဆင်ပါ။ ဆန္ဒရှိလျှင်စတော်ဘယ်ရီ။
သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ကြက်ဥအဖြူ၊ နို့၊ ထောပတ်၊ လျှော့ချရေး) ဟာအပူချိန်ဒါမှမဟုတ်နွေးထွေးမှုရှိမရှိသေချာစေဖို့သင့်ဘက်ထရီကမခဲယဉ်းပါစေ။
အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုအတွက်သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုချိန်ရန်အစားအစာအတိုင်းအတာကိုသုံးပါ။ ဤစာရွက်ကိုခွက်များသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ပျက်ကွက်စေနိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်စကေးသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုငါ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုဖတ်ပါ။
ငါသုံးတယ် Americolor လျှပ်စစ်ပန်းရောင် ငါ့ရဲ့လှပတဲ့ပန်းရောင်အရောင်ရဖို့အစားအသောက်အရောင်။ သင်ကထပ်ထည့်မထည့်လျှင်စတော်ဘယ်ရီမှအရောင်ထွက်လာပြီးသင်၏ကိတ်မုန့်သည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ငါသုံးတာပေါ့ Bosch Universal Plus ၎င်းအတွက်ရောနှောပါ၊ သို့သော်သင်သည်မည်သည့် KitchenAid stand mixer သို့မဟုတ်လက်ရောနှောစက်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
LorAnn ဆီကိုငါကြိုက်တယ် စတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့် emulsion, ဒါပေမယ့်သင်လည်း extract ကိုသုံးနိုင်သည်။
စတော်ဘယ်ရီ Buttercream မှတ်စုများ:
မင်းရဲ့ buttercream ကခေါက်နေတယ်ဆိုရင်အရမ်းအေးတယ်။ ထောပတ်ခွက်တစ်ခွက်ကိုယူပြီးအရည်ပျော်ခဲသည်အထိမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်အရည်ပျော်ပါ။ ၁၀-၁၅ စက္ကန့်လောက်။ အဲဒါကိုသင်၏ buttercream ထဲကိုပြန်ထည့်ပြီး creamy အထိရောမွှေပါ။
မြေတပြင်လုံးအစားအစာများ chantilly ကိတ်မုန့်မင်္ဂလာဆောင် berry သီး
ခြစ်ရာအနေဖြင့် vanilla ကိတ်မုန့်စိုစွတ်သော